Shiinaha Nooca Furan Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | Xinneng
Hawo-qaboojintu waa meesha bamka kuleylka ee qaboojiyaha uu yahay unug dhexe oo hawo qaboojiye ah oo u adeegsada hawo ahaan isha qabowga (kuleylka) iyo biyaha oo ah dhexdhexaad qabow (kuleyl). Iyada oo ah qalab isku dhafan oo loogu talagalay ilaha qabowga iyo kuleylka labadaba, bamka kuleylka qaboojiyaha ayaa baabi'inaya qaybo badan oo kaabayaal ah sida munaaradaha qaboojinta, matoorrada biyaha, kuleyliyaha iyo nidaamyada dhuumaha u dhigma. Nidaamku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed fudud, wuxuu keydinayaa meel rakibidda, dayactirka iyo maaraynta habboon, wuxuuna keydiyaa tamarta, gaar ahaan ku habboon meelaha aan lahayn ilaha biyaha.
Hawo-qaboojintu waa halka hawo-qaboojiyaha hawo-qaboojiyaha ahi yahay unug dhexe oo hawo-qaboojiye ah oo u adeegsada hawo ahaan isha qabowga (kuleylka) iyo biyaha oo ah dhexdhexaad qabow (kuleyl). Iyada oo ah qalab isku dhafan oo loogu talagalay ilaha qabowga iyo kuleylka labadaba, bamka kuleylka qaboojiyaha ayaa baabi'inaya qaybo badan oo kaabayaal ah sida munaaradaha qaboojinta, matoorrada biyaha, kuleyliyaha iyo nidaamyada dhuumaha u dhigma. Nidaamku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed fudud, wuxuu keydinayaa meel rakibidda, dayactirka iyo maaraynta habboon, wuxuuna keydiyaa tamarta, gaar ahaan ku habboon meelaha aan lahayn ilaha biyaha. Sidaa darteed, unugyada bamka kuleylka ee hawo-qaboojiyaha badanaa waa xalka doorbida naqshadaha injineernimada HVAC badan oo aan lahayn kuleyliyaha kuleyliyaha, shabakadaha kuleylka, ama ilo kale oo deggan oo la isku halleyn karo, laakiin u baahan qaboojiye sanadle ah. Nidaamka dhexe-qaboojiyaha dhexe iyo midka dhexe ee dhexe ee ka kooban aaladaha dhamaadka sida tuubooyinka iyo sanaadiiqda qaboojiyaha ayaa leh astaamaha qaab bedbeddelka qaababka kala duwan.
Unugyada isku soo ururiya waa qaybta ugu muhiimsan ee qolka qabow oo dhan. Qaybta isu-ururinaysa sida caadiga ah waa isku-urursiga sare ee nidaamka qaboojiyaha oo ay ku jiraan isku-darka kombaresarada, kondenser, mootada marawaxadaha, kontaroolada iyo saxanka sii kordhaya waxaan naqshadeyneynaa oo aan alifeynaa khad isku dhafan oo hawo qaboojin ah, biyo la qaboojiyey iyo unugyo ururin fog oo ka bilaabma qolka yar ee qabow ee monoblock qaboojiyaha ilaa nidaamka qaboojiyaha hayayaasha warshadaha aad u ballaaran.
Alaabtayada tayada sare leh, unugyada isku soo ururaya hal abuurka waxaa ka mid ah unugga iskuxirida banaanka, Unugga isku ururaya gudaha, qeybta hawo qaboojinta hawada ee toosan, nidaamka qaboojiyaha sariirta iyo qeybta qaboojiyaha monoblock, kuwaas oo loo farsameeyay waxtarka tamarta iyo u adeegida waxaana lagu siiyaa xulasho buuxda oo ah astaamaha caadiga ah iyo ikhtiyaarrada lagu buuxiyo wixii codsi qaboojiye ganacsi ah
Alaabtan taxanaha ahi waxay ka kooban yihiin qaab dhismeedka nooca sanduuqa leh compresser semi-hermetic, taasi waa mid isleeg oo muuqaal fiican leh. Waxaa loo isticmaali karaa hudheelada, maqaayadaha, daawooyinka, beeraha, warshadaha kiimikada dhammaan meelaha kale ee kaydinta qabow looga baahan yahay.
Model Koronto Kursiga hawada
W Kursiga hawada
hadda A Uumi bax
kala duwan Ku habboon
heerkulka Kondensarka Kaydinta dareeraha Cabirka ① mm Cabbirka rakibida ① mm Ku xiridda
biibiile Φ mm Miisaanka kg
m³ / h Model Mugga A B C D E nuugid Dareeraha
Xogta gaarka ah waxay ku xirnaan doontaa wax soo saarka dhabta ah.
Cooling Qaboojinta dheeriga ah ama xaddidaadda nuugista teheerkulka waa in la qaadaa marka heerkulka uumiga uu ka hooseeyo -15 ℃.
TemperatureMarka heerkulka uumiga uu ka hooseeyo -20 ℃, qaboojin dheeri ah ama xaddidaadda heerkulka nuugista ama tallaabooyinka qaboojinta buufin waa in la qaataa.
Hore: Qaybta Qaboojiyaha ee Wall Mounted Mounted Monoblock
Xiga: Chiller biyo ah